(Kugcine ukubuyekezwa On: 14/05/2020)
Ungakwazi ukushesha eFrance nase-Italy usebenzisa kuphela ngesivinini uxhumano. Enye yezindlela ezisheshayo futhi ezintofontofo zokuhamba usuka eRoma uye eParis ukuthatha iThello isitimela sejubane elisheshayo. Lokhu isitimela wesimanje ngeke uphehle eParis Ngokuphazima kweso. Okokuqala, uzothatha isitimela esinejubane elikhulu esiya eRoma esiya eMilan naseMilan ukuya eParis ezitimeleni eziphezulu zeThello. Isikhathi sokuhamba zalolu hambo kuyahlukahluka, kuye ngokuthi yiziphi ukuqeqesha ukha. Sincoma ukubhuka izihlalo zakho kusengaphambili njengoba kumele wenze ukubhuka lezi izitimela ukuvikela isihlalo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#genva i-roma Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ukulele travelparis travelrome